မွန်ဂိုလီးယားတွင်ခြောက်သွေ့သောခေါက်ဆွဲနှင့်အသားများ | Twesix
အပူစုပ်စက်အခြောက်ခံစက်, ခြောက်သွေ့သောအခန်း, ပရိတ်သတ်များ,
စက်ရုံ, လယ်ယာမြေများ အစုံ
ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအတွက် 10 နှစ်
အသိဉာဏ်စစ်ဆင်ရေးမျက်နှာပြင်။ ခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို screen ထဲသို့ချခြင်း, ခြောက်သွေ့စက်သည်လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အပူချိန်, စိုထိုင်းဆနှင့်ခြောက်သွေ့သောအချိန်ကိုအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ခြောက်သွေ့ပြီးတဲ့နောက်အခြောက်ခံစက်ကအလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်တော့မယ်
ခြောက်သွေ့စက်တစ်ခုလုံးကိုစက်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိစက်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်လုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းပြင်ပရှိအလုပ်အပိုင်းကဲ့သို့သောအဓိကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းတွင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အားလုံးကားမောင်းအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အရန်စက်ရုံများကိုစက်အတွင်း၌ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။ ဆက်သွယ်မှုပစ္စည်းအဆက်အသွယ်ပစ္စည်းများကိုစစ်ဆင်ရေး panel အပြင်ဘက်တွင်ထားရှိသည်။ အလယ်ပိုင်းအပိုင်းကိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းဖြင့်အထီးကျန်နေသည်။ ဤလုပ်ငန်းသည်အပြည့်အဝပိတ်ထားသောအခြေအနေနှင့်အညီအလုပ်လုပ်သည်။
1. တ ဦး တည်းယူနစ်တစ်ခု၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို, ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်ကြိတ်ခြင်း။
2. မြင့်မားသောတည်ငြိမ်သော granules ရရှိရန်ရိုးရှင်းသောဖြစ်စဉ်။ ရေသို့မဟုတ်အခြားအရည်များမထည့်သွင်းပါနှင့်ပြိုကွဲခြင်းမရှိသောကြောင့်တက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများဆုံးရှုံးမှုကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။
3. ရေအေးစနစ်ဖြင့်ဖိအား roller;
4. ယေဘုယျအားဖြင့် modular ဒီဇိုင်း, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံ, ပိုမိုကောင်းမွန်သောအာကာသအသုံးချခြင်း,
5. Power area ရိယာသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်ညစ်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်ရန်အလုပ် area ရိယာနှင့်ကွဲကွာနေသည်။
6. အလျားလိုက်အစာကျွေးခြင်းဖွဲ့စည်းပုံ, ထိတွေ့ခြင်းစနစ်, သန့်ရှင်းရေးစနစ်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူခြင်း,
7. GMP လိုအပ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံပါ
ခေါက်ဆွဲခြောက်စက် အမဲသား dehydrator